नेपाली क्रिकेट: खेलाडीको रगत र पसिनाको उचित मूल्याङ्कन कहिले हुन्छ ? - DURBAR TIMES
HomeOpinionनेपाली क्रिकेट: खेलाडीको रगत र पसिनाको उचित मूल्याङ्कन कहिले हुन्छ ?
नेपाली क्रिकेट: खेलाडीको रगत र पसिनाको उचित मूल्याङ्कन कहिले हुन्छ ?
‘नेपाली क्रिकेट’ यो सुन्ने बित्तिकै हामी हाम्रा खेलाडी, उनीहरुले गरेको मेहेनत, हामीलाई दिएका खुशीका पल, हामीसंग साटेका पीडाहरु सम्झिन्छौं। हर्ष,पिडा, दुख, मेहेनत सबै सम्झिन्छौं ।
हामी अहिलेको नेपाली क्रिकेटको अवस्था हेरेर अन्योलमा परेका छौँ । नेपाली राजनीति, नेपाल खेलकुद परिषद् र क्यानको तरिका हेरेर हामी यहाँ पुग्न पनि लायक छैनौँ । तर, हाम्रा खेलाडीहरुको कडा मेहेनतले यहाँ आइपुगेका छौँ । यो हाम्रो सौभाग्यको कुरा हो । कुनै राम्रो सुबिधा छैन। न त राम्रो डाइट छ , न त तलब नै छ। त्यहीपनि रातदिन घर ,परिवार नभनी देशको लागि लागि परिरहेका छन् । खेलाडी आफ्नो देशको नाम उच्च राख्न कसैले साथ नदिए पनि हरपल ज्यान दिएर लागि परेका छन् ।
कहिलेकाहीँ त लाग्छ देशको माया खेलाडी र हामी आम जनतालाई मात्र लाग्छ । पावर र पोजिसनमा हुनेहरुलाई के देशप्रति एकरत्ति पनि माया छैन ? न त खेलाडीको मेहेनतको मूल्याङ्कन गर्न सकेकाे देखिन्छ । नत उनीहरुले बगाएको रगतपसिनाको मूल्य । खेलाडीहरुले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने सबैथाेक गरिसकेका छन्। सबै त्यागेर आखिर के पाए त उनीहरुले ? केहि छैन…….
ठूलाबडा आफ्नो कुर्सि, सत्ता र आफ्नो घरपरिवार मात्र हेरेर बसेका छन् । के नेपाली जनताहरुले यसैको लागि भोट दिएर पठाएका हुन् ? के जनताले आफ्नो पैसा उनीहरुको भुँडी फुलाउन मात्र दिएका हुन् ?
सधैँ खेलाडीलाई बिना सुविधा नतिजाकाे आश गरेर कहिलेसम्म बस्ने ? यही हिसाबले नेपाली क्रिकेटको भविष्य के होला?
खेलाडीहरु आफ्नो देशको माया मारेर बिदेश पलाएन हुन बाध्य हुन्छन । अहिलेसम्म कति खेलाडी खाडीमा पसिना बगाइरहेकाे समाचार सुन्न पाइन्छ । उनीहरूलाइ गुमाएकाे क्षतिपूर्ति याे देशलाइ कसले तिर्ने ?
हाम्रा खेलाडीहरु अब्बल र सक्षम हुँदापनि आहिलेसम्म विदेशी लिगहरुमा आफुलाई स्थापित गर्न किन सकिरहेका छैनन्, यो माथिल्लो निकायकाले सोच्नपर्ने विषय हैन र ? पछिल्लो समय विदेशी लिगहरुमा व्यस्त रहने गरेका युवा स्टार सन्दिप लामीछाने पनि छायाँमा पर्दै गैरहनुले नेपाली समर्थकहरुमा निराशा छाएको छ । उनि एक मात्र खेलाडी हुन् जसले राम्रो अवसर पाएका थिए र नेपाललाई विश्वभर चिनाईराखेका थिए र छन् । मौका पाए सबै उच्च स्तरीय छन्। उनीहरुलाई मौका कसरी उपलब्ध गराउने भनेर सोच्न जरुरि छैन ? कहिले होला यो सरकारले देशमा रहेका हिरालाई चिन्ने र उचित मुल्यांकन गर्ने ? उनि श्रीलंकन लिगमा नि बिकेनन र केही दिन आगाडी मात्र आइपीएलको अक्सन भएको थियो त्यहाँ पनि उनि बिकेनन ।
के उनि र अरु नेपाली खेलाडीले चान्स नपाउनुमा उनीहरुको कमजोरी वा उनीहरु लाएक छैनन् ? मेरो विचारमा पक्कै पनि उनीहरुमा केही कमीकमजोरी छन् तर यो सँगसँगै उनीहरु अब्बल पनि छन्। तर उनीहरु हाईलाइटमा नआउनुको कारण भनेको हाम्रो देशको सिस्टम हो । सिस्टम गतिलो भइदिए खेलाडी हरुको मानसिक तथा बाैद्दिक विकास हुन्थ्यो ।अरुले हामीलाई हेर्ने नजर पनि अलि राम्रो हुन्थ्यो । हामी भन्दा तल रहेको अफगानिस्तान अहिले कुन ठाउमा पुगेकाे छ र त्यहाँका खेलाडीहरुले बाहिरी लिगमा लगातार चान्स पाइरहेका छन् । अफगानिस्तानबाट खेलाडी अब्बल भएपनि यदी त्यो देशको सिस्टम, विकास राम्रो छैन भने जतिसुकै राम्रा खेलाडी भएपनि उच्चस्तरीय प्रदर्शन गर्न सक्दैनन् भन्ने पाठ सिक्न सकिन्छ ।
करण केसी, कुशल मल्ल, सोमपाल कामी, दिपेन्द्र , अविनाश, रोहित, आरिफ, पवन, सुसान, सन्दीप यी युवा खेलाडीमा को भन्दा को कम छन् र ? सबैले उच्च सम्भावना बोकेका छन् तर त्यसको लागि सरकार गम्भीर भएर आफ्नो मात्र हैन देश जनता र खेलाडीहरुको हितको लागि काम गर्नपर्यो ।
नेपाली क्रिकेटको खम्बा तथा पूर्वकप्तान पारस खड्का विश्वस्तरीय खेलाडी हैनन् र ? नेपाली क्रिकेट डिभिजन-D देखि ODI स्टयट्ससम्म उनकै कप्तानीमा आएको हो ।तर आज उनले के पाए ? आफ्नो सम्पूर्ण जीवन देशलाई दिइसकेका उनलाई आज सरकारले के दियाे ? कप्तानले त केहि पाउन सकेका छैनन् भने अरु खेलाडीको त कुरै नगरौ । अहिले बरु उनि आँफै युवा खेलाडीहरुको राम्रो भविष्यको लागि लागिपरेका छन् । उनीहरुलाई आफ्नै पहलमा विदेशी लिगमा स्थापित गर्न लागि परेका छन्। आफ्नो कप्तानीको लोभ नगरि भविष्यमा नेपाली क्रिकेटले आफूभन्दा राम्रो कप्तान पाओस भनेर आफ्नो कप्तानी पनि युवाको काँधमा सुम्पिएर मेन्टर गरिरहेका छन् । हामी नेपाली र नेपाली क्रिकेट जगतको लागि भाग्यको कुरा हो कि हामीले उनीजस्तो महान खेलाडी पायौँ ।
म जस्ता लाखौँ समर्थकहरुको चिन्ताको विषय याे बनेको छ कि, आखिर कहिले पाउने मेरो देशले भिजन भएको र साच्चै माया गर्ने राम्रो र अब्बल लिडर ? यही बुढापाकाहरुको हातमा हामीले हाम्रो प्यारो देश सुम्पिरहने हो भने यस्तो सुन्दर र प्यारो देशलाई नर्क बनाएर छोड्छन् । देशमा युवाहरु कोहि पनि बाँकी हुदैनन् । पुर्खाहरुको रगतले बनेको देश यी महान खेलाडीहरुले विश्वसामु गर्वका साथ चिनाइराखेका छन् । सलाम छ सम्पूर्ण खेलाडीहरुलाई,जय देश !!! जननी जन्मभुमि स्वोर्गद्वापी गरियसी
लेखक दरबार टाइम्सका पत्रकारसमेत हुन् ।
Previous article‘जैस–उल हिन्द’ले लिए अम्बानीको घरबाहिर बरामद विस्फोटक पदार्थसहितको कारको जिम्मा
Next articleउकालाेकै गतिमा ओरालाे लाग्दै निफ्राकाे शेयर मूल्य